. ခြေလှမ်းဦး များနှင့် ကခုန်ခြင်း – နိဒါန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Community & Society » . ခြေလှမ်းဦး များနှင့် ကခုန်ခြင်း – နိဒါန်း	37
. ခြေလှမ်းဦး များနှင့် ကခုန်ခြင်း – နိဒါန်း
Posted by မြစပဲရိုး on Jun 5, 2015 in Community & Society | 37 comments
မနေ့ က ကလေးကျောင်း က စာတစ်စောင် ရတယ်။
“the link between social media (Facebook in particular) and its impact on self esteem and body image” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် နဲ့ research လုပ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားသူတွေ ပါဖို့ ဖိတ်ထားတာ။ မိဘ က သဘောတူညီပါတယ် ဆိုတဲ့ ဆိုင်းတော့ ထိုးပေးရတာပေါ့။
ထွက်လာမဲ့ Result က အတော်စိတ်ဝင်စားစရာဘဲ။
အဲဒီကနေ ကိုယ်ကျင်လည်ရာ ရွာထဲ မှာလဲ လေ့လာစမ်းစစ်ချက် Study လေးတစ်ချို့ လုပ်ချင်လာလို့။
ဒီ ရွာ ကို ဘယ်အချိန်စခဲ့လဲ လို့ မှန်းကြည့်လိုက်တော့
သူကြီး ရဲ့ “Who? What? Where? When? Why? How?” ပို့စ် ကတော့ Sep 11, 2008 မှာ ပထမဆုံး ပို့စ် အနေနဲ့ တွေ့တယ်။
ဒီတော့ သက်တမ်း ၇နှစ် ဆိုတာ နဲတာတော့ မဟုတ်ဘူး။
အဲဒီ ကာလထဲ ဘယ်သူတွေ ရှိခဲ့တယ်။ ဘယ်လို အကြောင်း တွေ နဲ့ ရွာထဲ ဝင်လာတယ်။ ဘယ်အချိန်ထိ Active ဖြစ်ခဲ့ တယ် စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ပေါ်ကြည့်ပြီး
ဘယ်လို အကြောင်း နဲ့ ဝင်တာ ဘယ်လောက် %၊ ရွာရဲ့ မန်ဘာ Turn over က ဘယ်လောက် %၊ ဆက်ပြီး Active ရှိနေတဲ့ % က ဘယ်လောက် စသဖြင့်ပေါ့။
. ကြည့်တဲ့ အကြောင်း ကို ပွိုင့်တစ်သိန်း ပြည့်ချိန် အထိ တာ့ကက်ထားပြီး လုပ်သွားမယ်။
(ဟိ ဟိ – ဒီ ယုန်ကြောင့် ဒီ ခြုံ ထွင်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင် အီရောဆွဲ နေမှာမို့) အချိန်ကလဲ သိပ်မပေးနိုင်တော့ မန်ဘာ တွေထဲက Random ယူပြီး တစ်ပါတ် ကို နှစ်ယောက် နှုန်း ထား တင်ပါမယ်။ (နားဦးလဲဆက် တည့်နေမှာပါ၊ ဒါမှ အမြန် ပြည့်မှာ) Random ယူရာမှာ ကံစီမံရာ ဖြစ်အောင် မန်ဘာပေါင်း ၂၀၀ လောက် ကို နံပါတ်တပ်ထားပြီး မဲ နှိုက်၊ မဲကျရာ မန်ဘာ ရဲ့ အကြောင်း ကို ပြောပြပြီး သူ့ ရဲ့ ပို့စ် တွေကနေ ဆိုင်ရာအချက်အလက် တွေ ကို ယူပြီး စာရင်း လုပ်သွားမှာပါ။
မဲ ဖန်ခွက်ထဲ မှာ မန်ဘာနံပါတ် တွေ ထည့်ပါမယ်။ (မောင်အံ ရဲ့ ကျေးဇူး မို့ ဒီလို လုပ်နိုင်တာလို့လဲ ပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါ မောင်အံရေ)
တစ်ပါတ် ကို အစမ်းသပ်ခံ ကံထူးရှင် ၂ယောက် နှုန်း ထွက်ပါမယ်။
တစ်ပါတ် ၂ယောက် မို့ တစ်လ ၈ ယောက်၊ နှစ်ကုန် ပိုင်းလောက်ဆို လူ ငါးဆယ် လောက်ရဲ့ စာရင်း ရပါပြီ။
ရွာဦးရေ ရဲ့ လေးပုံ တစ်ပုံ မို့ သိပ်ပြီး မခိုင်လုံတဲ့ အဖြေလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ အပျော်ပေါ့။ နော။
တစ်ခါက လုပ်ဖူးတဲ့ “ဂဏန်းများနှင့် ကခုန်ခြင်း” လိုပေါ့။
ဒီ တစ်ခါ နာမည်က “ခြေလှမ်း များနှင့် ကခုန်ခြင်း” လို့ အမည်ပေးပါမယ်။
စီးရီး ပေါင်း ၅၀ လောက်လို့ မှန်းထားကြည့်တာဘဲ။
ဒီ အရီး ဘာတွေ ပြောနေလဲလို့ မရှင်းဘဲ ရှုပ်နေရင် ပထမဆုံး လာမဲ့ ပွဲဦးထွက် လူ အကြောင်း မှာ ကြည့်ကြရအောင်။
ကွကိုယ်တောင် စလုပ်မှ သိမှာမို့။
မနက်ဖြန် မဲ လုပ်ပြီး စ နှိုက်မည်။
…. မျှော် …………………….. lol:-)))
မှတ်ချက် – တစ်ခု တော့ အားလုံး ကိုကြိုပြီး တောင်းပန်ထားပါရစေ။
တကယ်လို့များ ပို့စ်တွေ မှာ မှတ်ချက်ပေးနိုင်ဖို့ အချိန်မရှိခဲ့ ရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါလို့။
အားလုံး ရဲ့ ပို့စ်ကို နေ့တိုင်းတော့ ဝင်ဖတ် နိုင်ဖို့ ကြိုးစား ပါ့မယ်။ :-))
လူခေါ် မဲ့ မဲဖန်ခွက်
အမြီးလှုပ်တုတ်တုတ် နဲ့ ရှဉ့်ညိုလေး (ကြုံ တုန်း ထိုးပြလိုက်တာပါ)
မြစပဲရိုး says: ဒီလို လုပ်တာ သူကြီးမင်း ဆီက ခွင့်ပြုချက် တောင်းပါတယ်။
. ပေးမယ်လို့တော့ ထင်ပါရဲ့။ :-))
kai says: ကောင်းပါလေ့…
All (11,110) | Administrator (1) | Author (5) | Contributor (217) | Member Level2(11) ပြီးခဲ့တဲ့လကတော့…အောက်ကအတိုင်း ဂိုဂယ်က Analytic လုပ်ထား…။
Bounce Rate 63.25%
Alinsett @ Maung Thura says: Author (5) က ဘယ်သူတွေလဲဟင် သဂျီးး
မဝင့်ပြုံးမြင့် ၊ ကိုသော်ဇင်. . . နောက်ထပ် ဘယ်သူတွေပါလိမ့်
ရုတ်တရက် ကျနော်တို့ရွာထဲ ပရို စာရေးသူ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ ထိုင်စဉ်းစားနေမိ
kai says: အဲဒီလူတွေကစာရေးဆရာတွေကို.. ပြောတာမဟုတ်ဖူးဗျ..။
အရင်က.. နိုင်ငံခြားသတင်းစာကို..သတင်းပို့တယ်ဆိုတာ.. မဟာပြစ်မှုကြီးမို့.. တော်တော်လှီု့ဝှက်ရတာကလား..။
အခုမှပြန်ကြည့်မိတာ.. ရွာထဲ.. တယောက်မှ.. မရှိတော့..။
အပြင်မှာတော့.. အောင်မြင်နေကြတာ.. တွေ့နေရပါကြောင်း.။ အဲ..
အမှတ်မမှားရင်.. သမ္မတအကြံပေးထဲတောင်.. ၂ယောက်မက ဖြစ်နေသေး.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: “အမှတ်မမှားရင်.. သမ္မတအကြံပေးထဲတောင်.. ”
ဘယ်သူတွေမှန်း … သိတယ်သဂျီး…
ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှာလည်းရှိပါ့… Was this answer helpful?LikeDislike 12200
Alinsett @ Maung Thura says: ဂလိုဂိုးးးး
အခုလက်ရှိ မြန်မာ့ဂဇက် သတင်းစာ pdf နဲ့
ဒီရွာ ဒီစာတွေကို သိပြီး ဖတ်ရှုလေ့လာနေသူတွေထဲမလည်း
ပြည်တွင်းက နိုင်ငံကျော် စာရေးဆရာတွေ ဒါရိုက်တာတွေတောင် ပါနေသေး
ကျနော် အတင်းရော အဓမ္မရော
ဆရာမ မသီတာ (စမ်းချောင်း)
ဆရာ မင်းထင်ကိုကိုကြီး. . .စသည်. . .
သူတို့ခမျာလည်း မအားတဲ့ ကြားက လာလည်မှာ ထင်ပါ့
. မြန်မာပြည်တွင်းက ဆို ရွာထဲ ဝင်ရ အတော်ခက်တာ။
. တော်ရုံသံယောဇဉ် နဲ့ ဝင်လာဖြစ်မယ် မထင်။
အဲဒီလောက် ဝင်ဖို့ ခက်တာ ကို သူကြီးမင်း ကြုံ ပြီး စမ်းကြည့်စေချင်တယ်။
ခင်ဇော် says: က ပါ က ပါ မြ မြ ရာ။
ညည လ သာ သာ။
Ma Ei says: စိတ်ဝင်တစား စောင့်ဖတ်ပါမယ် မလတ်ရေ…
အမြီးလှုပ်တုတ်တုတ် နဲ့ ရှဉ့်ညိုလေး ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ…
အလုပ်စ၀င်ဝင်ချင်းက ဖိုးစိန်လမ်းထဲကခြံမှာဆိုတော့ ရှဉ့်ကလေးတွေ သစ်ပင်ပေါ် မြေပြင်ပေါ် ပြေးလွှားနေကြတာ အရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းတာ သတိရမိတယ်…
ရှဉ့်ကလေးတွေကို အဲ့တော့မှ မြင်ဘူးတာဆိုတော့ အထူးအဆန်းလဲဖြစ် ချစ်စရာလဲကောင်း
အသီးနှံလေးတွေ ယူသွားကျွေးရတာ သိတ် စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတာပါဘဲ…
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ရင်ခုန်ချင်စရာ ကောင်း အိ
တောင်ပေါ်သား says: သားသားကော ပါလာမှာလား ဟင် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .အင်း..ခြေလှမ်းဦးများနဲ့ ကခုန်တဲ့သူက ကခုန်တော့လည်း ကြည့်ရပေအုံးမပေါ့ဗျာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ဆိတ်ဝင်စားးးးး အဲ စိတ်ဝင်စားတယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် ဘယ်အဆင့်ထဲပါမှန်းမသိဘူး။ မဲကျရာမန်ဘာက အက်တစ်မဖြစ်တော့တာလည်း ဖြစ်န်ိုင်တာပေ့ါ။
ရွာစတင်တည်ထောင်တဲ့နေ့က Sep 11, 2008 ဆိုတာ သဂျီးအတည်ပြုပေးဖို့ လိုမယ်နော။
kai says: ရွာထောင်တဲ့နေ့က.. ၂၀၀၆ ဧပြီလ ၄ရက်နေ့လို့မှတ်မိတာပဲ..။ ၂၀၀၆နှစ်ဆန်းမယ် နာမယ်စဉ်စားလို့ရတာနဲ့.. ဒိုမိန်းနိမ်းဝယ်..။
ဧပြီလမှာ.. XOOP CMS နဲ့စတင်လိုက်တာ…။
၂၀၀၇.. သင်္ကန်းရောင်တော်လှန်ရေး.. နောက်.. နာဂစ်လည်းပြီးရော.. ဟက်ကာဝင်ပြီးဂန့်သွားတာမို့.. WP နဲ့ပြန်လုပ်တာပါ..။
WP နဲ့ထောင်တဲ့နေ့ကတော့.. ၂၀၀၈ဖြစ်မယ်ထင်တယ်..။
ကြားထဲ.. ၂၀၀၈က စာတွေတော်တော်များများ.. ဟက်ကာလက်ချက်နဲ့ပြန်တင်တော့.. ပြန်မရတာတော့ မှတ်မိတယ်..။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ရှဉ့်ကလေးကချစ်စာလေးညော်…
မြစပဲရိုး says: မင်း အတွက် ကြောင် တစ်ကောင် ပို့ လိုက်မယ်။
အဲဒါက ပိုပြီး အသားများတယ်။
ပြီးရင် တစ်ပုဂံ စာ ပြန်ပို့ပေး။ lol:-)))
မြစပဲရိုး says: အားလုံးဘဲ ကျေးဇူးကြီးပါ။ မနက်ဖြန် Project စဖို့ ကြိုးစားပါမည်။
နှိုက်လိုက် တဲ့ မဲလိပ် က ကိုမျိုး နံပါတ် ဆို သေချာပေါက် ပါမှာပါ။
မြစပဲရိုး says: ရွာဝင်စာရင်း (ခရက်ဒစ် – “မောင်အံ”) – I miss you my dear!!!
1. Kai (ရွာသူကြီး)
10. Aye.kk အမ အေး
11. Aung Naing Lin
14. Ba Gyi ဘကြီး
15. Big Defender
16. BigBird ကိုငှက်ကြီး
18. BlackChaw ဘလက်ချော
20. Bluerose စနိုးဝှိုက်လေး
21. Bu Gyi
23. Burmese or Chinese
24. char too lan
25. chatsu ၊ ချက်စု
26. Chityimhtoo ချစ်ရင်ထူး
30. Deparko ဒီပါကို
31. Diamond Key စိန်သော့
34. ET အီးတီ
35. Etone အိတုံ
မြစပဲရိုး says: F to K
36. Fatty ဦးဖက်
37. FattyCat ကြောင်ဝတုတ်
38. Foreign Resident အဘဖော
39. Frank Soolar
41. Green Rose
43. Hmee မှီ
44. Htet Way ထက်ဝေး
45. HtooSan ထူးဆန်း
50. Kaung Kg
51. Kaung Kin Pyar – ကောင်းကင်ပြာ
53. Khaing Khaing ခိုင်ခိုင်
54. Khin Latt အရီးလတ်
55. Knowledge Seeker
56. Ko htaik
57. Ko out of…
58. KoAung ကိုအောင်
59. KoKoThandar ကိုကိုသန်ဒါ
60. Kotun Winlatt ကိုထွန်းဝင်းလတ်
62. KyawKyaw11 ကျော်ကျော်
63. Ko Yin Maung – ကိုရင်မောင်
64. KyeeMite ကြီးမိုက်
မြစပဲရိုး says: L to N
65. Lin Naing
66. Lu Nyo Chaw လူညိုချော
67. LuLinmg လုလင်မောင်
68. MaMa မမ
69. Ma Ei
70. MaNawPhyuLay မနော
71. Mandalarthu မန္တလာသူ
72. MarbleCommet ကိုကမ်းကြီး
74. MaungMoeNyo မောင်မိုးညို
76. MayDay မေဒေး
77. May Flowers
79. Mg Mg မောင်မောင်
81. MgMgMone မောင်မောင်မုန်း
82. Mg Wine
83. Mical chan
86. Moe Minthar မိုးမင်းသားလေး
87. MoeThuZar မိုးသူဇာ
88. Moe Z မိုးဇက်
89. Mr. MarGa ဦးမာဃ
92. MyoHtat မျိုးထက်
94. Nagar Lay နဂါးလေး
96. Nigimi77 နီဂမီ
98. Novy နိုဗွီ
99. NoZoMi နိုဇိုမီ
မြစပဲရိုး says: P to T
100. Padomar ပဒုမ္မာ
102. Passing By
106. Phaung Phaung
107. photwenty ၊ ဖိုးတွမ်တိ
108. Pooch ပုခ်ျ
109. Pu ma
112. R Ga အာဂ
113. Rose Minn
114. Sandy ဆြာမလေး
115. San Hla Gyi
116. Shwe Ei – ရွှေအိ
117. Shwe Pont ရွှေပုံ့
118. shwe tallatr
119. Shwe Tike Soe ရွှေတိုက်စိုး
120. Sweet Tooth
121. silverhero တေတေဇက်
122. Snow White
124. Surmi ဆာမိ
125. Swal taw ywet
127. Than shwe
129. Thaw Zin Loikaw ၊ သော်ဇင် (လွိုင်ကော်)
130. The Best
131. Thel Nu Aye သဲနုအေး
132. Thit Min သစ်မင်း
133. Thiha YarZar
134. Thu Ra Tha Wah
136. ThuReinMaung သူရိန်မောင်
137. ThuYaZaw21451 သူရဇော်
138. Tin Tin တင်တင်
139. TiTan တိုင်တန်
140. True Answer
141. TT တီတီ
142. TTNU တီချယ်ကြီး
143. TwoTwo70 တူးတူး
မြစပဲရိုး says: U to Z
144. Unclegyi1974 အန်ကယ်ကြီး
145. U Myo
146. Uncle Kyaw
147. UncleLay အန်ကယ်လေး
149. WaiPhyo ဝေဖြိုး
150. WanWan ဝမ်ဝမ်
151. Water-melon ဖရဲ
152. We R One
153. WeiWei ဝေဝေ
154. WhoWho ဟူးဟူး
155. WindTalker ကိုပေ၊ မောင်ပေ
157. WinKhant ကိုဝင်းခန့်
161. Yin Nyine Nway
162. YE YINT THU
163. Yel Kaung
165. Zaw Min ဇော်မင်း
166. Zaw Wonna ဇော်ဝဏ္ဏ
167. Zay ဇေ
မြစပဲရိုး says: 169. ကိုကိုလူဆိုး
176. ခပ် King ကင်း
180. စနေ – မီးလေး
183. ဇွဲမာန် (အင်းဝ)
189. မဟာရာဇာ အံစာတုံး
192. မွန်မွန် – လုံမလေး မွန်မွန်
194. ရှုံးနိမ့်မှုများနဲ့ လူ – ကိုရှုံး
195. ရင် နင့် အောင်
196. ရှမ်းပြည်သား (တောင်ပိုင်း)
မြစပဲရိုး says: 201. အရိယသစ္စာခရီးသည်
206. စေပိုင်ထွဋ် (ပုသိမ်)
207. စောဝေတင့် (ပုဂံ)
208. ဇောက် ထိုး
213. သားဦး၊ မြေးဦး – ကိုနာဂ
216. မြို့ ဟောင်းသား
219. ရွှေ မင်း သား
223. ဟိန်း ၀င်း (ထားဝယ်သား)
224. captainAmerica ၊ အမေရိကန်ငတုံး
226. အော့ကြောလန်နန့်နန့်ထိုး ခွေးလယားသီး ဗြားကြီး
227. အေးဝတီ ကြီး
228. နှူးဘာဂိုဏ်းချုပ် (Azzurri) – အင်ဇာဂီ
230. KZ – ခင်ဇော်
233. MoonPoem – လကဗျာ
234. AlinnCho – အလင်းချို
239. ကိုစစ် – Ko Six
243. Snow smile- မနှင်းပြုံး
248. မျိုးသန့် – တောင်ပေါ်သား
253. ရေမြေ့ သနင်းးး
257. တော က ကိုရင်
မြစပဲရိုး says: ရွာထဲ ခြေရာလေးများ ချသွား/ ချနေဆဲ လူများ ရဲ့ စာရင်းပါ။
ကျန်နေသူများ ရှိနေရင် စာရင်းထဲ ဖြည့်ပါရစေ။
အသိပေးကြပါ။ ကျေးဇူး။ :-))))
တောင်ပေါ်သား says: ထင်တယ် သားသား မပါဘူးလို့
တော်ပီ ရွာကထွက် မြို့တက်တော့မယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: စောဒီး အကြီးကြီးပါရှင့်။ စစ်လိုက်ပါသေးတယ်။
. တောင်းပန်ပါတယ်။ နောက်တွေ့ချိန် မုန့်လိုက်ဝယ်ကျွေးပါ့မယ်။ :-))))
မြစပဲရိုး says: ဦးမျိုး က ကိုမျိုး မဟုတ်လား။ 145 ???
အဲဒီမှာ ဘဲ တောင်ပေါ်သား လို့ ဖြည့်ပေးမယ်နော်။ :-))
မြစပဲရိုး says: မဟုတ်ဘူး ကိုမျိုး ရေ။
U Myo ကို စစ်ကြည့်လိုက်တော့ ကိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။
ထပ်ပြီး စောဒီးပါတယ်။ အသေအချာ မစစ်လိုက် တဲ့ ကျွန်မ အပြစ်ပါ။
တကယ်တော့ ကိုယ့် အစ်ကို ကို မေ့ချန်ခဲ့စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး မဟုတ်လား။
ဒီလိုဘဲ Active ဖြစ်ရက် ကျန်နေသူများ ပြောပေးကြပါ။
ဒီ စာရင်းက ၂၀၁၂ ထဲက လုပ်ထားတာမို့ နောက်ပိုင်းလူ တွေ စာရင်းမပါ ဖြစ်နေတာ။
ခင်ဇော် says: စမီးး မောင်ရေးး (အရင်းး) ကျန်နေဒေးးးး
မြစပဲရိုး says: ဒါတွေကြောင့် ချစ်ရတာ။ အာဘွား :-))))
ခင်ဇော် says: ဆုမြတ်မိုး
အာဂ says: ကျနော့်နံပါတ်ကို ထီ သွားထိုးပါမည်။ ဟို7day သတင်းထောက်ကြီး များကျန်ခဲ့လားလို့ အဘဥကာကိုကို
သများး ဇီဇီဆာဆာတွက် လုပ်ထားးတဲ့ ကျန် စာရင်းးနဲ့ တိုက်ကြည့်တော့နော်..
၃) ရေမြေ့ သနင်းးး
၁၁) တော က ကိုရင်
၆၁ green rose
အာဂ says: တားလည်းပါဘု
ခင်ဇော် says: ကျန် စာရင်းး ပါဆို
​ဒေါ် လေး says: ရွာမှာ လူတွေများသားနော်
ဂဇက် ကိုစဖတ်တာ ၂၀၀၇ လို့ ထင်တာဘဲ